Imbali yoMlambo iWalk Loft-uLulula eDolophini
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguShelley
Phinda undwendwele ixesha elidlulileyo kwindawo entsha kraca ekwindlu ekharejiweyo ehlaziyiweyo yenkulungwane yeshumi elinesithoba. Ngezinto ezigcweleyo kunye nokuziva ekhaya, esi sesona siqalo sigqibeleleyo sokuphonononga ubumelwane obuyimbali, iRiver Walk, iSan Antonio Missions/UNESCO World Heritage site, kunye neyona ndawo ibalaseleyo yedolophu kunye neAlamo. Ifumaneka ngaphaya koMlambo iSan Antonio, jonga ngaphezulu kweekhilomitha ezili-100 zeendlela eziluhlaza ngebhayisekile okanye ngeenyawo. Ulandela imigangatho engqongqo yokucoca i-Airbnb/CDC kunye nosuku olongezelelweyo phakathi kweendwendwe. Buza ukuba kukho into oyifunayo, kodwa ungaboni.
Phinda undwendwele ixesha elidlulileyo kwindawo entsha kraca ekwindlu ekharejiweyo ehlaziyiweyo yenkulungwane yeshumi elinesithoba. Ngezinto ezigcweleyo kunye nokuziva ekhaya, esi sesona siqalo sigqibeleleyo sokuphonononga ubumelwane obuyimbali, iRiver Walk, iSan Antonio Missions/UNESCO World Heritage site, kunye neyona ndawo ibalaseleyo yedolophu kunye neAlamo. Ifumaneka ngaphaya koMlambo iSan Antonio, jonga ngaphez…
“Siyayithanda indawo yasedolophini kodwa eyimbali yaseKing William, apho iintsapho ezininzi zonwabele amakhaya.”
- Shelley, umbuki zindwendwe wakho
I-Cable TV, Ifeni esesilingini, I-Murphy bed, I-Queen bed, I-Smart TV, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
4.99 out of 5 stars from 295 reviews
4.99 (iingxelo zokuhlola 295)
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi295
UKumkani uWilliam sisithili sokuqala esiyimbali eTexas. SiseSan Antonio River Walk kufuphi nedolophu, kunye neemyuziyam ezine kanye kwisitrato sethu. I-Alamo yimayile enye ukusuka kumnyango wethu. Sineendawo zokutyela ezininzi, iibhari, iivenkile, kunye neendawo ezibonwayo onokuzibona kwiibhloko kunye nangeenyawo. Kungcono ukubeka izicathulo zokuhamba ukuze ubone yonke into. Hamba uhambe ngebhayisekile malunga ne-100 yeemayile ezintle kwaye zihlala zingasese iHoward W. Peak Greenway Trail System kwidolophu iphela.
Umgama ukusuka eSan Antonio International Airport
imizuzu eyi-14 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Umbuki zindwendwe ngu- Shelley
Inombolo yomthetho: City of San Antonio Permit Number 2018-007